I-Italy iyajikeleza. Ukudlula kwezintaba ezinzima kakhulu zomjaho - i-ULLER
I-Italy iyajikeleza. Izintaba eziyishumi ezinzima kunazo zonke zomjaho
Lapho ucabanga ngokuhamba ngebhayisikili futhi ikakhulukazi ngemincintiswano, akunakugwenywa ukuthi i- I-Italy iyajikeleza ukuzungeza ingqondo yethu. Umncintiswano owenzeka minyaka yonke ngenyanga kaMeyi kusukela ngo-1909 ngokungangabazeki uthole isikhundla sokuba ngomunye wemijaho efiseleka kakhulu emhlabeni webhayisikili kanye neminye imikhakha emibili emikhulu okungukuthi I-Tour de Francekanye neTour of Spain.
Lo mncintiswano, njengoba negama lawo liphakamisa, ubanjelwa e-Italy, futhi kwesinye isikhathi kunezigaba ezithile ezibanjelwa emazweni angomakhelwane. IGiro inohlelo lwesikhathi samasonto amathathu lapho kwenzeka khona izigaba ezahlukahlukene zomncintiswano.
Lapho kukhulunywa ngeGiro, kuyadingeka futhi ukuthi sisho izintaba namaphasi abo anzima okuthi minyaka yonke bonke ababambiqhaza kumele bafinyelele ekuqedeni izigaba zomjaho. E-Giro d'Italia akukaze kube khona ukukhathaliswa kwamachweba okufanayo nakwezinye izinhlanga ezisuka kokulula kuye kwezinzima (Okukhethekile, 1, 2, 3 ...) kepha kunalokho kwenziwe ngombala, ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ukuba ichweba elinzima kakhulu.kuphakeme, kuluhlaza ethekwini lesigaba sokugcina futhi kubomvu, kuphuzi futhi kuyimpunga kwamachweba amakhulu kakhulu ukuya kobunzima obuncane.
Uma ungumlandeli wamabhayisikili, qhubeka ufunde le ndatshana ngoba sethula izindlela eziyishumi ezinzima kunazo zonke zezintaba zeGiro d'Italia.
Esinye sezici ezikhanga kakhulu zeGiro, ngaphezu kokugujwa kwayo ezweni elihehayo nelidumile njenge-Italy, ukukhetha kwayo izintaba zezintaba ezingashiyi muntu ongenandaba. Izinhlobonhlobo zezindawo zezintaba zase-Italiya zivuna ukukhetha kwamachweba futhi ziqinisekisa ukuthi unyaka nonyaka ziyashintshana ngendlela engafani neze.
Ukubheka amapharamitha ahlukene njengobude, ukungalingani, amaphesenti nokuphakama, lawa ngamaphasi ayi-10 anzima kakhulu emncintiswaneni wase-Italy.
Etholakala empumalanga ye-Alps, iStelvio ingelinye lamachweba adume kakhulu kulo mncintiswano. Leli chweba, elisendaweni ephakeme ngamamitha angu-2757, liphindaphindeka kakhulu kulo mcimbi, ngaphezu kwalokho, ubunzima balo (obwesibili obunzima kunabo bonke e-Alps), kanye nombono we-panoramic wamajika alo, sekube yinganekwane umdlalo. Kusuka edolobheni lasePrato kunamakhilomitha angama-24,3 wokukhuphuka ngokuhluka okuphakathi kuka-7,39%, lokhu kusho ukuthi abagibeli bamabhayisikili bazobe behambe phakathi kwama-ascents nama-descents cishe ngamamitha ayi-1800. Njalo uma ebambe iqhaza emncintiswaneni uyabizwa UCima Coppi,igama elinikezwe amachweba asezingeni eliphakeme kakhulu. Iqhwa, ukuphelelwa umoya, kanye nemithambeka eshiwo ngenhla akuwenzi umsebenzi ube lula nakancane kubagibeli bamabhayisikili.
IMortirolo ixhuma izindawo ezisezintabeni i-Upper Valtellina ne-Upper Val Camonica kanti isikhathi sokuqopha ukukhuphuka kuyimizuzu engama-42 nemizuzwana engama-40. Kungokunye kokudlula okusemqoka kweGiro njengoba ine-asphalt enzima kakhulu nomgwaqo omncane owenza ukudlula kwabagibeli bamabhayisikili kube nzima ngokweqile kwazise amasondo awashibilili kalula, okwenza ukukhuphuka kube ngumsebenzi onzima okufanele uwucubungule. Ngaphezu kobunzima indawo esivele ibuletha, amajika nemithambeka akuncane kangako, empeleni, amakhilomitha awo ayi-11 anokungalingani okuphakathi kuka-8% kanti imithambeka yawo ephezulu ingu-10%.
Uma uhlala endaweni ngebhayisikili lakho, ungalilayisha, ubale ukuthi uhlala isikhathi esingakanani futhi uzizwe njengomdlali weqiniso waseGiro!
IZoncolan ibhekwa njengomqansa onzima kunayo yonke emathangeni. Itholakala phezulu kumaDolomites ekuphakameni kwamamitha ayi-1750, akuyona indawo yokwenyuka yazo zonke izethameli, ibanga layo elifushane elingu-9,8 km ukusuka edolobheni lase-Ovaro kuya phezulu kunxeshezelwa ngo-12% umehluko ophakathi ezingeni lemithambeka yawo futhi ama-maximums abo asondele kuma-23 kwezinye zazo. Akukona nje ukuqondana kwezinto ukuthi le ntaba yaziwa ngokuthi isango lesihogo.
UPasso della Spugla
Maphakathi naphakathi kwe-Italy neSwitzerland, uPasso della Spugla uvele ngonyaka wezi-2021 njengenye yamachweba anqumayo, ngaphezu kokuba ngowokugcina ngaphambi komncintiswano. Itholakala ngaphezu kwamamitha ayi-2000 wokuphakama ngamakhilomitha ayi-9 kanye nemithambeka enesilinganiso esingu-7,3% sokungalingani. Akungabazeki ukuthi esinye sezinyathelo ezinhle kakhulu eshiya izithombe ezihlaba umxhwele ngamajika ayo amise okwehhashi.
UPasso San Bernardino
Kwakuyisinyathelo eside kunazo zonke kumagazini ka-2021. Kutholakala eSwitzerland Alps, kunokukhuphuka okungamakhilomitha angama-23,7 kanye nokuthambekela okuphakathi kuka-6,2%. Ingxenye yokuqala yomzila ifuna kakhulu ngoba ukuthambekela okumaphakathi kuhlala kungu-7 no-8% kumakhilomitha ayi-14 amade. Ukuhlolwa kwamandla nokukhuthazela kwabasubathi!
Futhi etholakala e-Alps, kulokhu eningizimu yeRhetics futhi enokuphakama kwamamitha ayi-2621, iPasso Gavia ayishiyi muntu engenandaba. Eyaziwa njenge isihogo esingaphansi kuka-zero,leli chweba linikeze okuningi elizokhuluma ngakho. Ngo-1960, 1988 nango-2019 kuzohlala kuyizinsuku lapho uPasso Gavia ayengumdlali ophambili khona ngenxa yokwenyuka kwawo okwakunzima kakhulu yiqhwa namazinga okushisa angaphansi kuka-zero ayehla kakhulu lapho efinyelela phezulu njengango-1988 ngenkathi esenalo Lokhu Isimo sezulu asizange sishiye cishe noma yimuphi umhlanganyeli.
Njengoba engekho eGiro kusukela ngo-2011, ukubuya kwakhe kwakulindeleke kulo nyaka kuhlobo lwe-104 lomncintiswano. Njengoba ikhona esiteji 16, ibizoba namakhilomitha ayi-14 ngokuthambekela okuphakathi kuka-7,6%. Kodwa-ke, ngemuva kwengcindezi evela ku- abahamba ngebhayisikili, ekugcineni wahoxa osukwini. IPasso Fedaia nayo yaqanjwa ngegama elithi amathuna ompetha Kubo bonke abaholi abahlulwe kumarampu ayo, ngokungangabazeki kungenye yezinyathelo ezinganekwane zomcimbi waminyaka yonke.
Uma sikhuluma ngalesi sinyathelo, asisabhekiseli ekukhuphukeni noma ekuthambekeni, kepha sesiyokunye okungaxakekisa kakhulu ukukhuphuka kwabagibeli bamabhayisikili, kulokhu isimo sendawo. Lokhu kudlula kunamakhilomitha ayi-162 kanti angama-32 awakhonkiwe futhi asemhlabeni ohlangene, kuyilapho abokugcina abangama-70 baphakathi sterrate.I-13 km ene-incline ye-3,6% kuphela akufanele iveze noma yiziphi izinkinga uma bekungekhona ukungabi khona kwe-asphalt okungadala iziliphu nokungakwazi ukuqhubekela phambili kubasubathi. Izindaba ezimnandi? Ngokushesha nje lapho ufinyelela phezulu, ukwehla kuze kube sekugcineni kungama-4 km ubude futhi kulokhu kugandayiwe.
Kuwuphawu lokuhamba ngebhayisikili emhlabeni wonke ngoba obunye bobunzima obukhulu obukubandakanya ukuphumula okuncane abagibeli bamabhayisikili abanakho, ngoba ngemuva kokudlula ePasso Fedaia, abambalwa abasele kumele babhekane noPasso Pordoi ngokushesha okukhulu. Umthambeka wayo omude kunayo yonke unamakhilomitha ayi-13 no-6% othambekele.
NgePasso Giau esinye sezigaba ezisemqoka zango-2021 sifinyelele umvuthwandaba, uma kungenjalo kakhulu, ngokungangabazeki iyichweba elinqumayo, ngoba ngaphesheya kokunquma isigaba esinegoli elingu-18 km ukusuka phezulu, ungaphinde uhlole izinga elijwayelekile. Isinyathelo sonke sokushaya!
Amachweba ayingozi kakhulu futhi angahehi
Ngaphezu kwalezi zinyathelo ezingenhla kanye nezinye ezingenakubalwa, zeGiro d'Italia, kuphakanyiswe izikhathi ezingaphezu kwesisodwa amachweba amasha obekufanele abekwe eceleni ngenxa yobunzima bawo obedlulele nobungozi bawo kubasubathi.
Etholakala eduze kwaseTrento, lokhu kudlula kubhekwa njengokufushane, ngoba kunebanga lamakhilomitha ayi-7,5 kuphela, kepha abaningi bakubheka njengokuphasa okunzima kakhulu emhlabeni. Isizathu? Inemithambeka ethile emigwaqeni yayo ezungeze i-45% engalingani, ngakho-ke lawa makhwela awenzelwanga abaqalayo. Izimo zayo ezimbi kakhulu ziyaphoqa ukuthi kube yisinyathelo sokukhuphuka ngebhayisikili leMTB hhayi ngebhayisikili lomgwaqo. Ngaphandle kokuthi e2010 kwakukhona amahemuhemu wokungezwa kwakhe kwiGiro, ekugcineni akwenzekanga.
Njengoba kukhuphuka amakhilomitha ayi-15,5 kanye nomthambeka olinganiselwa ku-10%, iNtaba iCrostis yethulwa njengenye yezinzima kakhulu futhi iyingozi kakhulu. Etholakala e-Alps esifundeni saseCarnia, le ntaba yanikeza okuningi okuzokhulunywa ngakho, ikakhulukazi ngo-2011 ngenkathi yayiyingxenye yomzila waseGiro d'Italia, kodwa yagcina ilahliwe ngemuva kokuba abashayeli bamabhayisikili abaningi abanjengo-Alberto Contador bexwayise ukwehla kwayo okuyingozi ukuthi iphansi layo le-asphalt elihlanganisiwe futhi sterrate (umhlaba)
Uma ngabe ubucabanga ukuthi umhlaba wokuhamba ngebhayisikili ubusuvele unyathela nje, sinethemba lokuthi ushintshe umqondo wakho ngemuva kokukhuluma ngemigwaqo enzima ochwepheshe bamabhayisikili okufanele bayibekezelele emincintiswaneni efana naleyo I-Italy iyajikeleza. Uma kunalokho,Ungumlandeli weqiniso walo mdlalo futhi uyathanda ukuhamba nokuhamba emgwaqeni, ungakhohlwa ukuthi noma ungeyena umgijimi osezingeni eliphakeme njengalabo abakule mincintiswano emikhulu, ungavakashela namaphasi asezintabeni futhi uphile Isipiliyoni ulindeleni?
Imibuzo ebuzwa njalo ngeGiro d'Italia
Yini iGiro d'Italia?
IGiro d'Italia ngumncintiswano wamabhayisikili owenzeka kulo lonke elase-Italy nakwamanye amazwe angomakhelwane afana neSwitzerland ne-Austria. Ingenye yamaGrand Tours amathathu omhlaba lapho kwenezelwa khona iTour de France neTour Spain.
Ibanjwa nini iGiro d'Italia?
IGiro d'Italia ibanjwa minyaka yonke ngoMeyi futhi ihlala amasonto amathathu.
Zingaki izigaba i-2021 Giro d'Italia enazo?
IGiro d'Italia ka-2021 yayinezigaba ezingama-21 ezazakha ama-3410, ama-9 km esewonke.
Ngubani owine i-2021 Giro d'Italia?
U-Egan Bernal unqobe iGiro d'Italia kulo nyaka futhi wazuza ukunqoba kwesibili kweColombia kule lap.
10 imizila umbukwane ukwenza Trail Running eSpain
Thola imikhondo yemvelo ehamba phambili futhi ebabazekayo yomkhondo ogijima eSpain. Uhambo olusuka enyakatho yezwe lethu, luwela iziqongo zaseYurophu futhi luhlola ngisho nem
Thola imizila ehamba phambili ye-MTB eMadrid naseBarcelona
Uma uthanda i-MTB noma ucabanga ukuzikhuthaza ukuthi uqale, sikushiya kulokhu okuthunyelwe izindlela eziningi ze-MTB kuwo wonke amazinga eMadrid naseBarcelona, ​​kanye nomhlahlandlela walokho okudingayo.
Ukuvakasha, ezokuvakasha kwezemidlalo nezemidlalo e-Aran Valley
Ngabe iAran Valley edumile izwakala njengeFreerider Aymar Navarro odumile kusuka? Impela! Intengo yesigodi etholakala ePyrenees, ikakhulukazi esifundazweni saseLleida, eCatalonia.
Amapharadesi ama-5 we-MBT eYurophu
Imizila engcono futhi enhle kunazo zonke yokwenza i-MBT eYurophu. Amapharadesi ngaphakathi kwezintaba kusukela kuHam Route eSpain, adabula amaFjords eNorway, kuya eRoyal Deeside eScotland,
ICamino de Santiago ngebhayisikili
Umhlahlandlela ophelele wakho konke odinga ukukwazi ngeCamino de Santiago. Kokuthunyelwe kwethu namhlanje ngeke sikufundise imizila emi-4 kuphela, kodwa futhi, sikunikeza okhiye bokwenza lo mzila